"ဟိုက် ... ဒီလူ Template ပြောင်းပြန်ပြီ"
"ဟင် ... နောက်တစ်ခု ပြောင်းသွားပြန်ပြီ"
"ဟာ ... အနက် ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ"
ဒီဆိုဒ်ကိုအလည်လာသူ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ပြောလာမည့် အသံလေးတွေကို ခန့်မှန်းကြည့်တာပါ :) ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်း ဟိုစမ်း ဒီစမ်းလုပ်ရတာ အရမ်းဝါသနာပါတယ်။ အထူးအဆန်း အသစ် အသစ် လေးတွေတွေ့ရင် ဆိုဒ်မှာ Test လုပ်ကြည့်တယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘာလဲဆိုတာ သိချင်တာရယ် ဘယ်လို သုံးလဲဆိုတာ သိချင်တာရယ်ပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တတ်သလောက် ပြန်ပြီး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပါပဲ။ အခုလည်း အနက်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကျွန်တော့်မျက်စိကြောင့်လို့ပဲ ပြောမလား :-? အဖြူကို ကြည့်ရင် မျက်စိစူးနေသလို ခံစားနေရတယ်။ စိတ်ထင်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ :) နောက်ပြီး တစ်ချို့ script တွေကို လျော့လိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင် Loading Time အရမ်းကြာလွန်းလို့။ ဒါ့ကြောင့်လည်း CBox ကိုအပြင်မှာ သက်သက်ထုတ်လိုက်တာပါ :) နောက်ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ပို့စ်တွေမှာ ပုံတွေကို သုံးတော့ ပိုဆိုးတယ်။ LightBox ကိုလည်း ဖြုတ်လိုက်ပြီ(ဘာလဲ ... ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာသိသွားပြီလေ)။ နောက်ပြီး Jeroenwijering MP3Player အဲဒါလည်း ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ပြန်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တတ်သလောက် Sharing လည်း ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေ စဉ်းစားကြည့်တယ် ကျွန်တော် ဒီကနေ ကြည့်တာတောင် တစ်ခါတလေ နဲနဲကြာလို့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်နေရင် မြန်မာပြည်က (သို့) ကျွန်တော့်ဆီကထက် speed နှေးတဲ့သူတွေကြည့်ရင် ပိုဆိုးပြီပေါ့။ အဲဒီအချက်ကြောင့်လည်း တစ်ချို့ script တွေကို လျော့လိုက်တာပါပါတယ်။
ကဲဗျာ ... Template ပြောင်းထားလို့ မှားနေတာတွေ ... လိုအပ်နေတာတွေ ... အမြင်မတော်တာတွေ တွေ့ရင်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်၊ ထောက်ပြပြီး comment မှာ ရေးပေးသွားပါအုံး :)
away 2:17 am
မောင်ချမ်းရေ ဘလောခ့်ကိုတော့ ပြောင်းချင်တဲ့ တန်းပလိပ် ပြောင်းလို့ရတယ်နော်။ မျက်စိတော့ နည်းနည်းနောက်တာပေါ့။ ကောင်မလေးတွေကိုတော့ အဲ့လို ခနခန တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပြောင်းနေရင်တော့ အင်း နောက်ကနေ ဓါးမနဲ့လိုက်ခံရဦးမယ်နော်။ ကြုပ်ကြပ်လိဦး။
Chan Mya Soe 2:21 am
MgHla 3:41 am
Chan Mya Soe 3:53 am
ဟိုက်ရှ် .. အာစရိ .. ဘာတွေမှားနေလို့လဲ :)
စကားမစပ် ... တရုတ်ပြည်က မုန့်ဝယ်လာခဲ့ဗျာ။
Steven Alexander 4:41 am
ဒီတန်းပလိပ်က အရင်တန်းပလိပ် ထက်စာရင် တက်တာပိုမြန်တယ် ကောင်းပါတယ်။
Steven Alexander 4:47 am
Myo Kyaw Htun 6:43 am
နောက်တစ်ခါ လာပြန်ပြီဟေ့ ဟေ ဟေ ဝါးးးး
Ko Nay Gyi 11:50 am
လူဆိုတာဒီလိုပါပဲ...... အပြောင်းအလဲများတယ်။ ပြောင်းနိုင်၊ ပြောင်းတတ်သူတွေက မျိုးစုံပြောင်းတယ်။ အင်းလောကရဲ့နိယာမတရားတွေပဲ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သတိနဲ့ယှဉ်ပေါ့။ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
ပြောင်းလည်းပြောင်းနိုင်ပါ့ အကိုရယ်.. ဆိုဒ်များမှားဝင်လိုက်သလားလို့ ပြန်ကြည့်မိရသေးတယ်.. ကောင်းပါတယ်.. အချိန်ရရင်တော့ ပြောင်းတာ အသစ်အဆန်းပေါ့ .. စကားမစပ် ညီမဆိုဒ်ဘက်လည်း အကိုမလာတာကြာပြီနော် ... ဟွန်းးးးးးးးးးးးးးးး .. မမအဝေးပြောတာမှန်တယ်.. ထောက်ခံတယ် ချစ်မမ .. အကိုချမ်းမြစိုးကို ဓါးမနဲ့မဟုတ်ဘူး .... ကားနဲ့လိုက်တိုက်သတ်ကြမှာ :P :P
Hay Mar 6:22 pm
MgThaJan 10:33 pm
Chan Mya Soe 11:35 pm
အာစရိ .. Comment လာပေးတာ ကျေးဇူး :)
မေဆွိလား မြင့်မြင့်ခင်လား :P
ဟိုက်ရှ် ... ဘုန်းကြီးဝတ်နေတာလား :P
:O ပိုတောင် လန့်လာပြီ။ ညီမဆီကို လာလည်ပါတယ်ဗျာ ... စာမရေးဖြစ်သွားလို့ပါ :)
ဟိဟိ ဒီလိုပါပဲဗျာ :)
ကောင်း၏ ကောင်း၏ loading time တော်တော် မြန်သွားတယ်။ ဟိုတလောကဆိုရင် ဒီဘလော့ ဖွင့်ဖို့ တော်တော်ကြာတာ။
Chan Mya Soe 5:32 pm
ဟိုက်ရှ် ... ကွန့်မန့်တွေ ဘာတွေ ၀င်ပေးလို့ပါလား
ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ ဒီမှာ နေထွက်နေတာကိုး :P
အံမယ်… ပြောတဲ့ပုံက.. ကျုပ်ကဘဲ ကောမန့်ပေးပျင်းတဲ့ ငပျင်းကြီးလိုလို ဖြစ်ရော။ အဲဒီ ကောမန့် page တက်လာတာ နှေးတာ မစောင့်နိုင်လို့ပါ။ တန်းပလိတ်အဟောင်းလေး နှမြောစရာဘဲ။ သဉ္ဖာ့ကို ပေးလိုက်ပါလား။ :P
Chan Mya Soe 9:10 pm
Buddha Day - ကဆုန်လပြည့်နေ့
I will stand by you - Carrie Underwood
The WebMinster WebPlayer
10 Weird Things About CMS
Lyrics Pugin for Winamp and WMP
London (Colindale) Thingyan - 7
MM Music Box
London (Colindale) Thingyan - 6
London (Colindale) Thingyan - 5
မန္တလေး MCC သင်္ကြန်
London (Colindale) Thingyan - 4
သနပ်ခါး - BlackHole
Volume Control Problem in Window XP
London (Colindale) Thingyan - 3
Best Music Site (or) magesy.net
London (Colindale) Thingyan - 2
London (Colindale) Thingyan - 1
ဒီလို WebCam လေးတွေရှိရင် မကောင်းဘူးလား
ဟာသလေးတစ်ခု တကယ်လား ... အကြံအဖန်လား
သင်္ကြန် သင်္ကြန် မန္တလေးသင်္ကြန်
How to put HTML Tag/Code in Blogger Post
ထွန်းလှဟိုတယ် - မန္တလေး
Gold Styles Photoshop Styles
Dreamweaver MX Dynamic Applications
Buddhist Sand Art (သို့) ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့လက်ရာ
3GP and Unbelievable Video
Myriad Pro Open Type Font
Inserting Jeroenwijering Flash MP3 Player
ရှိတာလေးတွေ အကုန် ကုန်သွားပြီ